မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၊ အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒ မူဘောင်(မူကြမ်း)ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း သတင်း ( ၂၀-၁၂-၂၀၁၃ ၊ နေပြည်တော် )
မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို အချိုးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒ(မူကြမ်း)အား ရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် များချမှတ်၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိရာ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အဆင်ပြေစွာ သင်ကြားနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အဆောင်များ ဆောက်လုပ်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးလျက်ရှိ ( ၂၀ . ၁၂ . ၂၀၁၃ )
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ၊ သစ်တောတက္ကသိုလ်သည် လူသားအရင်းအမြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်(Knowledge- Professionalism- Service ) ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ သစ်တောပညာရပ်များကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါ သည်။ သစ်တောတက္ကသိုလ်တွင် အဆင့်မြှင့်ပညာ သင်ပို့ချနိုင်ရန် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု နှစ်ထပ် စာသင်ဆောင်သစ်၊ ကွန်ပျူတာခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ တောတွင်းလက်တွေ့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ စာကြည့်တိုက်အဆင့် မြှင့်တင်ပေးမှုများ၊ ခေတ်မီပညာ ရပ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီလေ့လာနိုင်စေရန် Internet ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို
တရားမဝင် သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ(၂၀-၁၂-၂၀၁၃၊နေပြည်တော်)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ကြိုးဝိုင်း၊ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် တရားမဝင် သစ်နှင့်သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းများ ခိုးယူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် စီမံချက် ချမှတ်၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။